August 4, 2020 1323
विदेशवाट गर्भव’ती अवस्थामा आएकी महि’लाले शिशु जन्माएपछि आफुसंग राख्न स’मस्या हुने महशुष गरेर बालगृहमा बुझाइन् । उनले परिवारका सदस्यलाई पनि शिशुका बारेमा नबताएका कारण’ जन्मदिएको बच्चालाई आफुसंग राख्न सकिनन् ।
त्यसैले बालगृहलाई बच्चा’ जिम्मा लगाइन् । तर बालगृहले भने त्यही बच्चालाई लावारि’स फेला पारेको भन्दै मिडियामा प्रचार’वाजी गरेको खुलेको छ ।
आफुले बालगृह’मा जिम्मा दिएको बच्चालाई कार्टुनमा राखेर फालेको अवस्थामा फेला पारेको भन्दै मिडियावाजी गरेपछि बच्चाको आमाले बालगृह पुगेर बच्चा आफु’लाई दिन मा’ग गरिन् । बच्चाको न्वारन भइसकेपछि त्यो घटनाका बारेमा रहस्य खुलेको हो ।
साउन १३ गते कार्टुनमा राखिए’को बच्चाको एउटा तस्वीर भाइरल भएको थियो । कपनको आका’शेधारा चौरमा बेवा’रिसे अवस्थामा शिशु फेला परेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा एकै छिनमा भाइरल भयो ।
केयर बालगृहकी सञ्चालि’का पुष्पा अधिकारीले १२ गते साँझ बेवारिसे अवस्थामा शिशु भेटिएको भन्दै सबैभन्दा प’हिला युटेयुवरलाई खबर गरिन् ।
वेवारिसे अवस्था’मा बच्चा फेला परेपछि प्रहरीलाई खबर गर्नु’पर्नेमा उनले सबैभन्दा पहिला युट्युवरलाई खबर गरेर बोलाइन् । युट्युवमा वेवारिसे बच्चा फेला परेको भन्दै भिडियो सार्वज’निक भएपछि सहयोगको ओइरो लाग्यो ।
अहिले सम्म करिब ६ लाख रुपैया जम्मा पनि भइस’केको प्रहरी अनुसन्धानवाट खुले’को छ । पालन पोषणका लागि भन्दै बालगृहमा जिम्मा ‘दिइएको बच्चालाई वेवारिसे भन्दै सड’कमा लगेर राखेपछि अहिले बालगृह सञ्चालिका पुष्पा विवादमा तानिएकी छन् । प्रह’रीले सो घटनाको अनुसन्धान थालेको छ ।
महानगरीय प्रह’री परिसर, काठमाडौंका प्रमुख एस’एसपी श्यामलाल ज्ञवालीका अनुसार शिशु बेवारिसे नभएको पाइए पछि अनुसन्धान थालेको बताएका छन् । खाडी मुलु’कबाट हालै उ’द्धार गरेकी एक महिलाले त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा शिशुलाई जन्म दिएकी हुन् ।
उनले शिशुला’ई आफूसँग राख्न’ सकिनन् र केयर बालगृहको जिम्मा लगाएकी थिइन् । घटना सार्वजनिक भएपछि प्र’हरीले आमाको दाबी स्वीकार गर्दै बच्चा उनलाई जिम्मा लगाएको छ ।
अहिले बालगृ’हकी संचालिनका पुष्पामा’थि पैसा उठाउन झुटो प्रचार गरेको आरोपसमेत लागेको छ । तर पुष्पाले भने अप्ठेरोमा परेको महिलालाई आफुले सहयोग गरेको दावी गरेकी छन् । ‘
उनले आफ्नो पैसा उठाउने’ कुनै उद्देश्य नभएको बताउँदै आएकी छन् । संस्थालाई चन्दा उठाउने उद्देश्य हो कि भन्ने विषय’मा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
यसै बीच त्यी बच्चाको आमा मिडिया’मा आएकी छिन् । आफूले बच्चा फाल्ने योजना नबनाएको र यो अरु कसैको योज’नामा आफू प्रयोग भएको उनले बताएकी छिन् ।।
हेर्नुहोस् यो भिडियोमा कुरा कानी….
Prevफ्यालिएको बच्चाकी आमा रुँदै आइन्, भन्छिन् ‘बच्चा फाल्ने प्लान मेरो होइन अरुकै हो’ (भिडियो सहित)
Nextपसलमा किन झुण्ड्याइन्छ कागती र खुर्सानीको माला ? यस्तो छ कारण
ध्यान लगाएर हेर्नुहोस् त: यो फल कुन हो ? ९५ प्रतिशतको गलत जवाफ
रोपाइँमा खिचिए यस्ता दृश्य, जुन बने टिकटकमा भाईरल (हे`र्नुस् भिडियो) (115095)
महिला ट्राफिक प्रहरीको यो रमाइलो टिकटक भाईरल, ४१ लाख बढीले हेरे (भिडियो सहित) (111186)